ထောင်ထဲမှာဘဲ ဆက်နေမယ်ဆိုတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့အူဝဲရဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းလာတဲ့ မေတိုးခိုင်…. – Cele Oscar
ထောင်ထဲမှာဘဲ ဆက်နေမယ်ဆိုတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့အူဝဲရဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းလာတဲ့ မေတိုးခိုင်….
October 28, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတျတှခေဈြခငျအားပေးရတဲ့ သရုပျဆောငျပွတေီဦး နဲ့ အူဝဲကတော့ ပွညျသူနဲ့ အတူ အမှနျတရားဘကျက ရဲရဲ ဝငျ့ဝငျ့ ရပျတညျပေးခဲ့လို့ မတရားဖမျးဆီးခံခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာပွတေီဦးနဲ့အူဝဲက ပွနျလှတျအောငျ ခံဝနျကတိထိုးတာကို ငွငျးဆနျခဲ့တဲ့လို့ သတငျးတှပွေနျ့နပွေီး မတေိုးခိုငျ ကလညျးသတငျးမှားသာဖွဈကွောငျး နဲ့ အူဝဲ ရဲ့ အဈမဖွဈသူကလညျးအခုလို ရှငျးပွလာပါတယျ။
မောငျလေး ပွတေီဦးနဲ့ ညီမအိန်ဒွာကြျောဇငျ တို့ရဲ့ သတငျးအမှားတှေ အမွဲတကျနတော နဲ့ ပတျသကျလို့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို တနျဖိုးထားပွီး ခဈြပေးတဲ့ ပရိတျသတျတှအေနနေဲ့ မိသားစုကတငျတဲ့ သတငျးကလှဲလို့ ဘယျသတငျးမှ မယုံကွဖို့၊
Followers မြားတဲ့ account တှအေနနေဲ့လညျး မိသားစုက အတညျမပွုပဲ သတငျးမြားမတငျကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျ။ အကွောငျးအရာ အမှားတှဟော ကာယကံရှငျမိသားစု ကို ထိခိုကျနဈနာစလေို့ပါ။ အိမျမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ကလေးလေးတှကေိုလညျး ငဲ့ညှာသော အားဖွငျ့ ကူညီပေးကွပါ။
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦး နဲ့ အူဝဲကတော့ ပြည်သူနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက်က ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ပေးခဲ့လို့ မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြေတီဦးနဲ့အူဝဲက ပြန်လွတ်အောင် ခံဝန်ကတိထိုးတာကို ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့လို့ သတင်းတွေပြန့်နေပြီး မေတိုးခိုင် ကလည်းသတင်းမှားသာဖြစ်ကြောင်း နဲ့ အူဝဲ ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူကလည်းအခုလို ရှင်းပြလာပါတယ်။
မောင်လေး ပြေတီဦးနဲ့ ညီမအိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ သတင်းအမှားတွေ အမြဲတက်နေတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ မိသားစုကတင်တဲ့ သတင်းကလွဲလို့ ဘယ်သတင်းမှ မယုံကြဖို့၊
Followers များတဲ့ account တွေအနေနဲ့လည်း မိသားစုက အတည်မပြုပဲ သတင်းများမတင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ အမှားတွေဟာ ကာယကံရှင်မိသားစု ကို ထိခိုက်နစ်နာစေလို့ပါ။ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေကိုလည်း ငဲ့ညှာသော အားဖြင့် ကူညီပေးကြပါ။
အကယ်ဒမီများရှင် တယောက်ကို ဉာဏ်ရည်ပါ မမှီတော့တာလား ဆိုပြီးပေါ်တင်ချဲလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်……